Inta badan CBD Aids Sleep Aids ayaa si khaldan loo calaamadeeyay • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn CBD Inta badan CBD Aids-ka Hurdada ayaa si khaldan loo calaamadeeyay
Inta badan CBD Aids-ka Hurdada ayaa si khaldan loo calaamadeeyay
albaabka Ties Inc. 4 May 2022
maqaal by Ties Inc. 4 May 2022
Daraasad la sii daayay Arbacadii ayaa muujisay in badi alaabooyinka hurdada ee CBD si khaldan loo calaamadeeyay, iyadoo 60 boqolkiiba ay muujinayaan heerarka khaldan ee maaddooyinka firfircoon ee baakaddooda.
Cilmi-baadhista ay Arbacadii soo saartay isha CBD ee Leafreport ayaa muujinaysa in in ka badan kala badh badeecadaha CBD ay ka leexdaan calaamadda. Heerarka maaddooyinka sida cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN), iyo melatonin waxay ka duwan yihiin in ka badan 10 boqolkiiba calaamadda.
1 Saliida xashiishada ee kaniiniyada hurdada
2 3 shay oo ay tahay in maskaxda lagu hayo markaad dooranayso CBD
3 Cilmi baaris lagu sameeyay alaabta hurdada ee cbd
4 Kaabsoosha ugu saxsan
Saliida xashiishada ee kaniiniyada hurdada
Cilmi baaris ayaa muujisay in isku dhafka cannabis, oo ay ku jiraan CBD iyo CBN, waxay taageeri karaan hurdo caafimaad leh. Taasi waxay keentay in ay korodho qalabka hurdada ee ay ku jiraan cannabinoids, oo inta badan lagu daro waxyaabo kale oo dheeri ah, oo ay ku jiraan melatonin. Laakin cilmi baarista Leafreport waxay muujineysaa in wax ka yar kala bar alaabada la tijaabiyay lagu calaamadeeyay heerar sax ah oo maaddooyin firfircoon ah.
Leafreport waa saynis ku salaysan, degel dib loo eegay oo macaamiisha siiya macluumaadka ku saabsan CBD. Hadafka shirkadu waa in ay keento daahfurnaan warshadaha CBD iyada oo loo marayo bukaan-ku-salaysan, nuxur waxbarasho iyo qiimayn caafimaad oo ay sameeyeen koox dhakhaatiir ah, farmashiyeyaal, nafaqeeyayaal, farmashiistayaal iyo naturopaths.
3 shay oo ay tahay in maskaxda lagu hayo markaad dooranayso CBD
Gal Shapira, maamulaha wax soo saarka ee Leafreport, ayaa sheegay in ay jiraan saddex arrimood oo muhiim ah oo ay tahay in macaamiishu ay tixgeliyaan marka ay dooranayaan alaabada CBD. "Waxa ugu muhiimsan ee la sameeyo waa in la hubiyo in calaamaddu ay isticmaasho shaybaarka baaritaanka dhinac saddexaad iyo in Shahaadooyinkooda Falanqaynta (CoA) ay ku xiran yihiin calaamadaynta alaabta ama ugu yaraan si cad loogu sheegay boggooda," Shapira ayaa ku qoray iimaylka "Tijaabooyinku waxay xaqiijinayaan in alaabtu aysan ku jirin wasakhooyin waxyeello leh iyo in qiyaasta ay tahay mid sax ah."
"Waxyaabaha labaad ee la tixgelinayo waa haddii badeecada lagu qeexay inay tahay go'doon, muuqaal ballaadhan, ama muuqaal buuxa," Shapira ayaa sii wadata. "Qeexitaannadan ayaa aad muhiim ugu ah go'aaminta joogitaanka cannabinoids kale sida THC. Qodobka saddexaad ee muhiimka ah ee ay tahay in macaamiishu ogaadaan waa fiitamiin dheeraad ah iyo waxyaabo dheeri ah oo lagu daro marka lagu daro walaxda firfircoon ee CBD iyo haddii ay ku qoran yihiin CoAs.
Cilmi baaris lagu sameeyay alaabta hurdada ee cbd
Si loo dhammeeyo daraasadda, Leafreport waxay iibsatay 52 alaabada hurdada ee CBD, oo ay ku jiraan xanjo, tinctures iyo kaabsal. Alaabooyinka ayaa markaa loo diray Infinite Chemical Analysis, shaybaar xashiishad la aqoonsan yahay oo ku taal California, halkaas oo heerarka CBD, CBN iyo melatonin lagu cabiray laguna duubay marka la barbardhigo shahaadooyinka falanqaynta ee ay bixiyeen soosaarayaasha alaabada.
"In kasta oo kala duwanaansho laga filayo badeecadaha CBD, haddana waa inay ku sii jirtaa heerar macquul ah. Khubarada warshaduhu waxay ku talinayaan in alaabada xashiishadda ay lahaadaan maaddo cannabinoid ah oo ku jirta 10% ee calaamadda, taasoo la micno ah in badeecadaha CBD ee saxda ah ay ku jiraan inta u dhaxaysa 90% iyo 110% ee xayaysiisyada cannabinoid-ka, ”Leafreport ayaa ku sharraxday daraasadda. "In kasta oo melatonin uusan ahayn cannabinoid, waxaan sidoo kale isticmaalnay 10% bartilmaameedka si aan u ahaado mid joogto ah."
Wax yar in ka yar kala badh badeecadaha waxaa ku jira heerar aan sax ahayn oo CBN ah, halka in ka badan kala badh ay sheegeen heerar aan sax ahayn oo CBD ah. Laba ka mid ah saddexda badeecadood ee ay ku jirto melatonin waxay lahaayeen heerar aan waafaqsanayn calaamadda. Alaabooyinka ay ku jiraan laba ka mid ah maaddooyinka la tijaabiyay way ka saxsanaayeen kuwa ka kooban hal ama dhammaan saddexda. Kaliya 29% ayaa ku habboon calaamadda. Sagaalka badeecadood ee ka kooban dhammaan saddexda maaddooyinka ee la tijaabiyey, shan (55,6%) ayaa la kulmay calaamadda, laakiin hal keliya ayaa u sameeyay walxo kasta.
Kaabsoosha ugu saxsan
Alaabooyinka hurdada ee CBD ee qaabka kaabsal waxay u badan tahay inay lahaayeen heerar sax ah oo ah maaddooyin firfircoon. Kaabsooshadu waxay ka sarre martay dhammaan qaybaha badeecadaha, iyadoo 50% ay ku habboon tahay calaamadda, oo ay ku xigto 40% xanjo iyo 30% tinctures. 32 ka mid ah alaabooyinka loo xayaysiiyay si ballaadhan ama muuqaal buuxa, 25% ayaa si khaldan loo calaamadeeyay.
"Run ahaantii, natiijooyinka cilmi-baaristan waa naxdin waxayna sii wadaan inay muujiyaan baahida loo qabo warshadaynta CBD oo hufan," Shapira ayaa ku yiri hadal ku saabsan baaritaanka Leafreport. "Macaamiishu waxay ka faa'iidaystaan ​​heerarka tayada qaarkood." Leafreport waxay halkan u joogtaa si ay u caawiso isla macaamiisheeda inay go'aamo xog ogaalnimo leh ka gaadhaan waxa ay geliyeen jidhkooda. Waxaan u aragnaa warbixintan inay tahay adeeg lagama maarmaan ah si loo caawiyo macaamiisha inay hubiyaan inay iibsadaan alaabada run ahaantii shaqaynaysa."
Akhri wax dheeraad ah Forbes.com (Source, EN)
Elixir ee Nolosha - Cannabis ma kaa caawin karaa inaad noolaato wakhti dheer?
Sidee CBD waxtar ugu yeelan kartaa...
Dalka Koonfur Afrika ee Lesotho ayaa lacag kaash ah...
Shirkadda Unilever ee Schmidt's Natural si ay u iibiso alaabada hemp iyo waxyaabaha carfiya ee CBD